Global Voices teny Malagasy » Taonan’ny tolona ara-politika sy fanehoana firaisankina tsy nampoizina tao Amerika Latina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Janoary 2019 6:01 GMT 1	 · Mpanoratra Laura Vidal Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Latina, Fanoherana, Fifidianana, Fifindràmonina, Foko sy Fiaviana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Vahoaka Quechua any Bolivia. Sary navoaka azo ampiasaina araka ny Creative Commons CC0.
Noho ny fifindramonina goavana, hetsi-panoherana nahafatesana olona sy fiovan'ny governemanta, taona niavaka ho an'i Amerika Latina sy ny fiarahamonina Espaniola manerantany ny taona 2018 [taona nahitsin'ny tonia mg].
Amin'ny maha-vavolombelona sy mpilaza hevitra eo noho eo ny toe-javatra tahaka ireny, nanampy antsika tamin'ny fitaterana izany ireo mpandray anjara ato amin'ny Global Voices. Manomboka amin'ny hetsi-panoherana tao Nikaragoà hatramin'ny krizy Venezoeliana, noresahanay ireo tantaran'ny faharetana, ny firaisankina tsy ampoizina, ary ny endrika fanoherana tsy mahazatra.
Krizy sy ny fifindramonina faobe
Amin'izao fotoana izao, Venezoeliana an-tapitrisany no nandositra ny fireneny ary maro no mampiasa ny sehatra an-tserasera mba hanampiana ny hafa te-hanao toy izany koa.
Raha vao nandeha tany amin'ny toerana tokony halehany, dia niatrika fanavakavahana avy amin'ny olona teo an-toerana — sy famerana hafa izay tsy voafetra amin'ny fiteny na kolontsaina ireo any am-pielezana tsy mitsaha-mitombo.
Moi, xénophobe : Chronique d'un flux migratoire 
Mandritra izany, miharatsy ny krizy ao Venezoela. Ny tsy fahampian-tsakafo, miaraka amin'ny haavon'ny herisetra an-tanandehibe, dia misy fiantraikany amin'ny vehivavy. Ny fanitarana ny endrika fanarahamaso ataon'ny fanjakana dia mitovitovy amin'ny Big Brother an'i George Orwell – ary ny fifandraisan'ny fanjakana amin'ny orinasan-teknolojia goavana ao Shina dia maneho fa hitombo hatrany ny fanarahamaso.
Any avaratra, mankany Meksika ny “valalamanjohin'ny mpifindramonina” mandositra ny herisetra any Amerika Afovoany ary mamoha ny fihetseham-po mankahala mpifindra monina. Manaraka akaiky izay mitranga ao amin'ny sisintany miaraka amin'i Etazonia ny haino aman-jery, saingy tsy mba maka fotoana hanazavana ny antony  mahatonga ny Amerikana Afovoany handositra  ny toerana nonenany.
Fiovan'ny fahefana sy fifandanjam-pahefana tarihin'olom-pirenena
Voahozongozona ny demaokrasia any Goatemalà amin'ny fandàvan'ny Filoha Jimmy Morales hanavao ny fe-potoam-piasan'ny Vaomiera Iraisam-pirenena miady amin'ny tsimatimanota tohanan'ny Firenena Mikambana. Nanohana ny fiverenan'ilay kaomisera ny fitsarana tampony ao amin'ny firenena, mampisy fanantenana ho an'ireo izay manohana ny fikambanana ara-dalàna amin'ny ady atao amin'ny tsimatimanota izany. Tsy niverina nankany Goatemalà ny kaomisera Iván Velázquez, na izany aza, ary tamin'ny resadresaka vao haingana dia nanameloka ny ezaka fanampiny ataon'ny governemanta hanakatonana ny vaomiera izy. Anisan'izany ny fanesorana vao haingana  ny tsy fahazoana manenjika ara-pitsarana ara-diplaomatika ireo mpiasa miisa 11 ao amin'ny Vaomiera.
Any Nikaragoà, nivadika ho hatezerana nasionaly manohitra ny kolikoly sy ny sivana ny fihetsiketseham-panoherana ny fanavaozana ny fiarovana ara-tsosialy. Haingana sy mahery setra  ny famoretana. Olona maherin'ny 300 no maty hatramin'ny nanombohan'ny hetsi-panoherana tamin'ny volana Aprily. Niharan'ny herisetra mahery vaika ihany koa ny mpanao gazety. Manondro ny governemantan'i Daniel Ortega ho tompon'andraikitra voalohany ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona
Niady hevitra momba ny fanovana ny lalàmpanorenena izay hifehy ny aterineto ao amin'ny nosy ireo olom-pirenena Kiobàna.
Fanitsiana lalàmpanorenena hafa ny mety ho fankatoavana ara-dalàna ny fanambadian'ny pelaka, ka nitarika adihevitra mafana teo amin'ny fiarahamonina Kiobàna.
Mankalaza ny faha-50 taonan'ny tsingerintaonan'ny Hetsika Meksikana tamin'ny taona 1968 i Meksika. Volana maro taty aoriana, nifidy filoham-pirenena ankavia izy taorian'ny nitondran'ny governemanta ankavanana ampolony taona maro. Na izany aza dia tsy nangina izy rehefa nambaran'i AMLO  ny fananganana polisy miaramila  izay hiady amin'ny heloka bevava an-drenivohitra. Maro ny fahasarotana miandry ny filoham-pirenena vaovao, saingy antenaina fa hitondra fanampiana ireo hetsika tarihin'olom-pirenena .
Tsy i Meksika ihany no nahitana fifidianana nanozongozona ny faritra. Nanaitra ireo fikambanana marobe mpandala ny zon'olombelona  i Fabricio Alvarado, prezidàn'i Costa Rica, kristiana mpandala ny nentim-paharazana, ​​indrindra fa ireo fikambanana izay miaro zon'ny LGBTQ. Na izany aza, ilay mpandala ny fandrosoana, Carlos Alvarado no mpandresy ary niaraka taminy, Epsy Campbell Barr, vehivavy filoha lefitra mainty hoditra voalohany tao Costa Rica.
Firaisankina eo an-toerana sy manerantany
Nampiaka-peo noho ireo mpikatroka ara-tsosialy novoina ny Kolombiana. Tao anatin'ny tapa-taona monja, dia mpikatroka maherin'ny zato no namoy ny ainy . Noho ny fifanarahana momba ny fandriampahalemana sy ny fivoaran'ny ady an-trano  ao amin'ny firenena, dia nisy ny ady hifehezana ny tany.
Farany, dia Arzantina no akaiky indrindra hatrizay  amin'ny fankatoavana ny fanalan-jaza ho ara-dalàna. Niafara tamin'ny latsa-bato manohitra izany ny Senà, saingy goavana ny hetsika teny an-dalambe sy antserasera ary nampiseho firaisankina tsy hay hadinoina tao Amerika Latina sy ny any ivelany .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/15/132520/
 Tantara antserasera momba ny fialan'ireo Venezoeliana ny fireneny: https://mg.globalvoices.org/2018/10/30/128547/
 Moi, xénophobe : Chronique d'un flux migratoire: https://fr.globalvoices.org/2018/10/15/229370/
 Miala Tsiny Fa Tsy Miteny Anglisy Aho. Sary no Teniko: https://mg.globalvoices.org/2018/07/31/122525/
 Ny Vehivavy no Tena Mizaka ny Krizy Ao Venezoelà: https://mg.globalvoices.org/2018/09/08/125838/
 Pourquoi les Vénézuéliens voient-ils leur pays dans « 1984 » de George Orwell?: https://fr.globalvoices.org/2018/12/04/230931/
 Les Vénézuéliens frémissent en découvrant le contrat de reconnaissance biométrique passé avec un géant chinois de la technologie: https://fr.globalvoices.org/2018/12/29/231732/
 hanazavana ny antony: https://globalvoices.org/2016/02/01/the-dangerous-and-complex-reality-of-women-who-join-central-american-gangs/
 Ny fahatongavan'ny valalamanjohy no ahitan'i Meksika ny lafiny maha-tsy tia mpifindramonina azy ihany koa: https://mg.globalvoices.org/2018/11/21/130292/
 fanesorana vao haingana: https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/guatemala-pulls-diplomatic-credentials-of-un-bodys-workers/2018/12/18/80cfed9c-0300-11e9-958c-0a601226ff6b_story.html?noredirect=on&utm_term=.9b103479aad5
 Ady amin'ny tsi-fisaziana, nanapa-kevitra hanohana ny fiverenan'ilay mpikamban'ny vaomiera miady amin'ny kolikoly ny fitsarana ambony ao Goatemala: https://mg.globalvoices.org/2018/09/19/126367/
 Haingana sy mahery setra: https://globalvoices.org/2018/04/23/sosnicaragua-at-least-25-demonstrators-and-one-journalist-killed-in-nicaragua-say-human-rights-groups/
 tompon'andraikitra voalohany : https://globalvoices.org/2018/06/19/we-are-victims-who-assist-victims-documenting-human-rights-violations-in-nicaragua/
 Ao anatin'ny famoretana ny fihetsiketseham-panoherana governemanta, manome voninahitra ireo nodimandry ny Nikaragoana: https://mg.globalvoices.org/2018/05/30/120278/
 Afaka miditra amin'ny adihevi-panjakana momba ny lalàmpanorenana vaovao amin'ny alalan'ny fitaovana nomerika ankehitriny ny Kiobàna: https://mg.globalvoices.org/2018/09/13/125991/
 Michel Gonzalez Nuñez: “Heveriko fa manafintohina ny mankatoa lalàna momba ny ‘fahapelahana’ ao anatin'ny revolisiona be risikain-dehilahy”: https://mg.globalvoices.org/2018/07/23/123171/
 faha-50 taonan'ny : https://globalvoices.org/2018/09/26/fifty-years-after-the-mexican-movement-of-1968-students-continue-their-march-against-violence-and-impunity/
 fananganana polisy miaramila: https://globalvoices.org/2018/12/04/amlo-mexicos-new-pacifist-president-will-create-a-militarised-police-force-to-fight-street-crime/
 hetsika tarihin'olom-pirenena: https://globalvoices.org/2018/10/24/interactive-maps-become-a-tool-to-fight-crime-in-mexico/
 Sarintany ifarimbonana lasa fitaovana hiadiana amin'ny heloka bevava ao Meksika: https://mg.globalvoices.org/2018/10/26/128429/
 Nanaitra ireo fikambanana marobe mpandala ny zon'olombelona: https://globalvoices.org/2018/03/27/lgbtqi-rights-defenders-sound-alarm-over-costa-ricas-presidential-election/
 Ny mahazavadehibe ny fananana mpikatroka Afro-feminista ao amin'ny governemantan'i Costa Rica: https://mg.globalvoices.org/2018/07/12/122793/
 Nampiaka-peo : https://globalvoices.org/2018/11/07/volunteers-chronicle-the-lives-of-murdered-colombian-activists-in-words-and-drawings/
 mpikatroka maherin'ny zato no namoy ny ainy: https://www.theguardian.com/world/2018/aug/23/colombian-activists-face-extermination-by-criminal-gangs
 fifanarahana momba ny fandriampahalemana : https://en.wikipedia.org/wiki/Colombian_peace_process
 ady an-trano: https://en.wikipedia.org/wiki/Colombian_conflict
 Mikatso ny fizotry ny fandriampahalemana ao Kolombia ary mitombo ny famonoana ireo mpikatroka ara-tsosialy: https://mg.globalvoices.org/2018/09/28/126896/
 akaiky indrindra hatrizay: https://globalvoices.org/2018/03/08/as-women-march-in-argentina-the-country-debates-legalizing-abortion/
 firaisankina tsy hay hadinoina tao Amerika Latina sy ny any ivelany: https://globalvoices.org/2018/08/08/the-abortion-legalization-movement-in-argentina-gets-a-boost-of-global-solidarity/
 Le mouvement pour la légalisation de l'avortement en Argentine encouragé par une solidarité mondiale: https://fr.globalvoices.org/2018/08/09/227821/